INKQUBO ESEMTHETHWENI AID IWEBHUSAYITHI
INKQUBO ESEMTHETHWENI AID KWIWEBHUSAYITHI
Ukuba ufuna urgent isemthethweni uncedo xa ufuna kwi kunzima imeko, kwaye a lawyer ayifumaneki, ungasoloko sebenzisa ikhadi neenkqubo zomthetho aid Wesizwe Isemthethweni Iinkonzo. Kunye neenkqubo zomthetho kukunceda ezikhoyo inkxaso evela eyona specialists ekunene kwi luhlomle kuwo ukuze ukulungiselelwa amaxwebhu kwaye ukumelwa ekuhambeni ka inombolo iincoko kunye abameli ye-mandla kunye nezinye counterparts na usuku evekini kwaye naliphi na ixesha lemini.
National Isemthethweni Inkonzo imisebenzi kuba zombini abantu baza kuba organizations. Le nkonzo ifumaneka ngokubanzi kakhulu — ayisosine nje umjikelo ikloko isemthethweni uncedo kwi-addressing kaxakeka imiba (yi-umnxeba, i-Skype okanye e-mail), kodwa drafting commenting lwamaxwebhu, luhlomle kuwo iintlanganiso ngakumbi.
Ingaba isemthethweni aid
Innovative isemthethweni iinkonzo ezifumanekayo ukuba wonke umntu abo bought ikhadi neenkqubo zomthetho uncedo. Ikhadi bubungqina bothando ukuba umnini-ndawo unelungelo bafumane iingcebiso kunye neenkqubo zomthetho inkxaso kwi-iifomati obaluliweyo yayo isimo. Ngakumbi isemthethweni iinkonzo kufuneka — semfundo i-denomination ikhadi ufuna ukuthenga ukuze kusoloko kukwazi ukufumana oluneenkcukacha ingcebiso a lawyer, Umphathi okanye marketer, ngokusemthethweni olugqibeleleyo uxwebhu okanye cima ingxoxo nge ummeli we-mandla umthetho.
Amakhadi kufuna ezahluka-mali ka-iinkonzo. Ngenxa diversification ka-irhafu ye-National Isemthethweni Inkonzo thathwa njengoko isemthethweni abantu abemi. Kuba abantu amathuba afanelekileyo free unxulumano kwaye ifowuni iintlanganiso zokubonisana kuba abanini-mhlaba ishishini iinkonzo ka-komhlaba lwamaxwebhu kwaye ngokufaneleka izisombululo ukuya ngezixhobo ezahlukeneyo imiba ukuba kuphela kusenokuba faced yi-entrepreneur, large iinkampani kuba nako ngokukhawuleza kabini-qinisekisa izibalo ka-corporate abaqondisi-mthetho kwaye khupha kwezabo isemthethweni amasebe.
Kutheni profitable: — isemthethweni aid-intanethi naphi na ehlabathini
Izibonelelo lokuthenga amakhadi isemthethweni aid iqulathe hayi kuphela malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza umjikelo ka ikloko inkxaso evela ingcaphephe kuzo zonke iindawo, umthetho. Abaxhasi Yesizwe Isemthethweni Inkonzo:
Gcina ixesha ngenxa yokuba azidingi kuhlangana kunye a lawyer — inkxaso inikeziwe ekude ngokusebenzisa lula kuba umthengi unxibelelwano isiqhagamshelanisi.
Ukugcina imali — olugqityiweyo impahla ka-umthengi inkonzo nayiphi fare iindleko kakhulu ngaphantsi a lawyer.
Uqinisekile kwi-zikhona neenkqubo zomthetho aid abaqondisi-mthetho ukusebenza jikelele iwotshi, ibiza kuba holders ka-amakhadi neenkqubo zomthetho aid simahla.
Ukufumana ingcebiso kwaye iimpendulo imibuzo nawuphi na umhlaba, umthetho.
Ukongeza umbono osemthethweni uncedo kuba cardholders iquka inani ezongezelelweyo iinkonzo. Oku kuquka ulungiselelo iifomu lwamaxwebhu kwaye esezantsi iifomu, kwaye zokusebenza noncedo abantwana abaxhasi, kwaye ubizo ngeenkonzo zongxamiseko, kwaye reservation iinkonzo hotels kwaye ezibanzi zezothutho, Shuttle inkonzo, oko kubalulekile kuba rhoqo travelers.
Precedent Intengiselwano Uhlalutyo - Isikhokelo Ekubaleni M I-Precedents